Madaxweyne Xasan Sheekh oo golaha wasiirada DFS kala hadlay ARRIN culus oo ku soo fool leh! - Caasimada Online
Home Warar Madaxweyne Xasan Sheekh oo golaha wasiirada DFS kala hadlay ARRIN culus oo...
Madaxweyne Xasan Sheekh oo golaha wasiirada DFS kala hadlay ARRIN culus oo ku soo fool leh!
Muqdisho (Caasimada Online) – Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shalay ka qeyb galay shirkii Golaha wasiirada oo ahaa mid degdeg la isugu yeeray golaha wasiirada oo aan caadi ahayn, waxaana la sheegay inuu shir guddoomiyay madaxweynaha.
Kulanka ayaa looga dooday qorshaha dowladda ee dib u eegista miisaaniyadda 2015 iyo shirka lagu wado inuu ka dhaco Muqdisho dabayaaqada bishan ee u dhexeeya Soomaaliya iyo beesha caalamka (High Level Partnership Forum HPLF).
Shirkan oo maamulada dalka ka jira kasoo qeyb galayaan ayuu madaxweynuhu Golaha wasiirada ku booriyay inay doorkooda qaataan oo qorshe cad la yimaadaan.